आइतबार जुलाई 25, 2021 |
आइतबार जुलाई 25, 2021
विषय — सत्य
वर्ण पाठ: स्वर्ण पाठ: भजनसंग्रह 25 : 10
“"परमप्रभु सधैं ती मानिसहरू तर्फ दयालु र सत्य हुनुहुन्छ जसले उहाँको प्रतिज्ञा र करारहरू मान्दछ।"”
उत्तरदायी पढाइ: 1 यूहन्ना5: 3-6, 20
6 येशू ख्रीष्ट उही नै हुनुहुन्छ जो रगत र पानीसित आउनु भयो। येशू पानीबाट मात्र आउनु भएन। येशू पानी अनि रगत दुबैबाट आउनु भयो। अनि आत्मा नै एक छ जसले यो परिक्षा गर्छ। आत्मा सत्य हो।
1. व्यवस्था. 32 : 1-4
1 हेआकाश! सुन, म बोल्नेछु, हे पृथ्वी! मेरो मुखको वचनहरू सुन।
2 मेरा शिक्षाहरू झरी झैं पर्नेछन्। भूइँमा खस्ने तुषारो जस्तै झर्नेछन् नरम घाँसमा पर्ने पानी जस्तै झर्नेछन् हरिया बोटहरूमा पानी झैं पर्नेछन्।
3 किनभने म परमप्रभुको नाउँ घोषणा गर्छ, हाम्रा परमेश्वरको महानताको प्रशंसा गर।
4 उहाँ चट्टान हुनुहुन्छ कारण उहाँका बाटाहरू सही छन्, परमेश्वर सत्य र विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। उहाँ असल र इमानदार हुनुहुन्छ।
2. यशैया. 28 : 16, 17
16 ती कुराहरूले गर्दा परमप्रभु मेरो मालिक यसो भन्नुहुन्छ, म चट्टान राखिदिनेछु। एउटा मूलढुङ्गा-सियोनको भूईंमा। यो एकदमै बहुमूल्य ढुङ्गा हुनेछ। प्रत्येक कुरा यस महत्वपूर्ण ढुङ्गामाथि बनाइनेछ। जसले त्यो ढुङ्गामा भरोसा राख्दछ उ निराश हुनेछैन।
17 मानिसहरूले पर्खाल सिधा देखाउनलाई वजन सहितको साऊल प्रयोग गरे। त्यस्तै प्रकारले के चाहि ठीक हो देखाउनलाई म इन्साफ र सद्भावना चलाउनेछु। दुष्ट मानिसहरू तिमीहरू आफ्नो चलाकी अनि झूटोको पछाडी लुक्न खोजिरहेछौ। तर तिमीहरू दण्डित हुनेछौ। तिमीहरू लुक्ने ठाउँहरूमा तूफान वा बाढी जस्तो ध्वंश गर्न आइरहेछ।
3. हितोपदेश. 12 : 19
4. यूहन्ना 1 : 6-8, 14, 16, 17
6 परमेश्वरद्वारा पठाइएको यूहन्ना नाउँका एकजना मानिस थिए।
7 यूहन्ना त्यही ज्योतिको विषयमा साक्षी दिन आएका थिए। उनकै माध्यमद्वारा मानिसहरूले ज्योति र विश्वासबारे जान्न-सुन्न पाए।
8 यूहन्ना ज्योति थिएनन्, तर उनी ज्योतिको बारेमा साक्षी दिन आएका थिए।
14 वचन शरीर हुन आए र हामी माझ बसे। हामीले उहाँको महिमा देख्यौं, अनि हामीले पिताका एकमात्र पुत्रको महिमा जस्तो उहाँको महिमा देख्यौं। वचन अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण थियो।
16 उहाँ वचन अनुग्रह र सत्यको भण्डार हुनुहुन्छ। हामीले उहाँबाट धेरै आशिष पाएका छौं।
17 मोशाबाट व्यवस्था प्रदान गरिएको थियो तर अनुग्रह र सत्यको बाटो येशू ख्रीष्टबाटै आयो।
5. मर्कूस.5: 25-30, 32-34
6. मत्ती5: 1, 2, 6, 17
7. मत्ती7: 24-27
24 हरेक मानिस जसले मैले भनेका यी कुराहरू सुन्छ र पालन गर्छ उनै बुद्धिमान हो। बुद्धिमान मानिसले आफ्नो घर चट्टानमाथि निर्माण गरेको छ।
27 अति बृष्टिको कारणले बाढी आयो, आँधीले घरलाई हान्यो र त्यो ठूलो आवाज सहित ढल्यो।
8. हिब्रू4: 12
12 परमेश्वरको वचन जीवित छ र क्रियाशील छ। उहाँको वचन कुनै दुईधारे तरवार भन्दा धारिलो छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई गहिरो गरी काट्छ। यसले आत्मा र प्राण, जोडिएको ठाउँमा काट्छ। यसले जोर्नी र हड्डी समेत काट्छ। यसले भित्री भाव र विचार सम्म जाँच्छ।
9. मत्ती 16 : 13-18
13 जब येशू सिजरिया फिलिप्पीका इलाकामा पुग्नुभयो। उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई सोध्नुभयो, म मानिसको पुत्र हुँ। मानिसहरू मलाई को हो भन्छन्?
14 चेलाहरूले जवाफ दिए, कसैले तपाईंलाई बप्तिस्मा दिने यूहन्ना हुन् भन्दछन्। कसैले तपाईंलाई एलिया हुन् भन्दछन्। अनि कसैले तपाईंलाई यर्मिया अथवा कुनै अगमवक्ताहरू मध्ये एकजना ठान्छन्।
15 तब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू चाहिं मलाई को हो भन्छौ?
16 शिमोन पत्रुसले जवाफ दिए, तपाईं ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको पुत्र।
17 येशूले भन्नुभयो, तिमी धन्य हौ, हे योनाको छोरो शिमोन। कुनै पनि मानव जातिले तिमीलाई यो सिकाएको होइन। स्वर्गमा भएका मेरा पिताले तिमीलाई प्रकाश गरिदिनुभएको हो।
10. यूहन्ना 8 : 12-16, 31, 32
12 त्यसपछि, येशू फेरि मानिसहरूसंग कुराकानी गर्न थाल्नु भयो। उहाँले भन्नुभयो, म संसारको ज्योति हुँ। जुन मानिस मेरो पछि लाग्दछ ऊ कहिल्यै अन्धकारमा पर्ने छैन। त्यस मानिसले ज्योति पाउनेछ जसले जीवन प्रदान गर्नदछ।
13 तब फरिसीहरूले येशूलाई भने, तपाईं आफै आफ्नु गवाही दिइरहनु भएकोछ। यसर्थ तपाईको गवाही अमान्य ठहरिन्छ।
14 येशूले जवाफ दिनुभयो, हो, यदि मैले यी कुराहरू आफ्नै विषयमा भनिरहेको छु। तर मैले भनेका कुरा सत्य हुन्। किनभने म जान्दछु म कहाँबाट आएको हुँ र कहाँ जान्छु। म तिमीहरू जस्तो होइन। तिमीहरू जान्दैनौ म कहाँबाट आएँ र कतातिर गइरहेछु।
15 तिमीहरूले मलाई अन्य मानिसलाई सरह न्याय गर्दैछौ। म कुनै मानिसलाई न्याय र्गदिनँ।
16 तर यदि मैले न्याय गरें भने, मेरो न्याय सत्य हुनेछ। किन? किनभने जब म न्याय गर्दछु म एक्लो हुन्न। पिता जसले मलाई पठाउनु भयो उहाँ मसंग हुनुहुन्छ।
31 तब येशूले भन्नुभयो कि यहूदीहरू जसले उहाँमाथि विश्वास गरे, यदि तिमीहरूले लगातार मेरो शिक्षाहरू पालन गरिरह्यौ भने तिमीहरू साँच्चै मेरो चेलाहरू हौ।
32 तब मात्र तिमीहरूले सत्य जान्नेछौ। अनि सत्यले तिमीहरूलाई मुक्ति गराउनेछ।
1.7: 13-21
विचारकहरूको समय आएको छ। सत्य, सिद्धान्त र समय-सम्मानित प्रणालीबाट स्वतन्त्र, मानवताको पोर्टलमा दस्तक दिन्छ। विगतका साथ सन्तुष्टि र भौतिकवादको चिसो परम्परागतता बिग्रँदै छ। परमेश्वरको अज्ञानता अब विश्वासको लागि एक पाइला हो। आज्ञाकारिताको एक मात्र ग्यारेन्टी भनेको उसको सही पकड हो जसलाई राम्ररी जान्नु भनेको अनन्त जीवन हो। साम्राज्यहरू पतन भए पनि, "प्रभुले सदासर्वदा शासन गर्नुहुनेछ।"
जब हामी परमेश्वरमा धैर्य गरेर पर्खन्छौं र सत्यको खोजी गर्छौं, उहाँले हाम्रो मार्ग देखाउनुहुन्छ।
सत्यले स्वतन्त्रताको तत्व ल्याउँछ। यसको ब्यानरमा आत्मा-प्रेरित आदर्श वाक्य छ, "दासत्व समाप्त भयो।" परमेश्वरको शक्तिले बन्धनमा परेकाहरूलाई छुटकारा दिन्छ। कुनै शक्ति ईश्वरीय प्रेमको सामना गर्न सक्दैन।
येशूले आफ्नो चर्च स्थापना गर्नुभयो र ख्रीष्टको उपचारको आध्यात्मिक जगमा आफ्नो लक्ष्य बनाए।
चेलाहरूले अरूलाई भन्दा तिनीहरूका मालिक अझ राम्रा पक्राउ गरे; तर तिनीहरूले के भने र गरेका सबै बुझेनन्, वा तिनीहरूले उहाँलाई त्यत्ति धेरै सोध्नु हुने थिएन। येशू धैर्यतापूर्वक सिकाइरहनुभयो र अस्तित्वको सत्यता प्रदर्शन गर्नुभयो। उनका विद्यार्थीहरूले सत्यको यस शक्तिले बिरामीहरूलाई निको पार्छन्, दुष्टलाई फ्याँकिन्छन्, मरेकाहरूलाई ब्यूँताउँछन्; तर यस अद्भुत कार्यको अन्तिम कुरा आत्मिकरूपमा बुझ्न सकिएन, क्रूसमा टाढा नपुगुञ्जेल, जब तिनीहरूका अफाट शिक्षक तिनीहरूको सामु उभिए तब बिरामी, पाप, रोग, मृत्यु, र चिहानमाथि विजयी।
बुझ्नको लागि तिर्सना, गुरुले दोहोर्याए, "तर कसले भन्छौ कि म हुँ?" यो नविकरण अनुसन्धानको अर्थ थियो: कसले वा यो के गर्न सक्दछ जुन काम गर्न सक्षम छ, लोकप्रिय दिमागमा यति रहस्यमय?
आफ्नो सामान्य गतिहीनताको साथ, शिमोनले आफ्ना भाइहरूको लागि जवाफ दिए, र उनको जवाफले ठूलो तथ्य प्रस्तुत गर्‍यो: "तपाईं ख्रीष्ट, जीवित परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ!" त्यो हो: मसीह हो तपाईंले घोषणा गर्नुभएको, - ख्रीष्ट, परमेश्वरको आत्मा, सत्य, जीवन, र प्रेम, जो मानसिक रूपले निको पार्छ। यो भनाइ येशूबाट निस्कीएको थियो, "धन्य हुन तिमी, शिमोन बार-जोना: किनकि मासु र रगतले तपाईंलाई यो प्रकट गरेको छैन, तर मेरा स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताले।" त्यो हो, प्रेमले तपाईंलाई जीवनको बाटो देखायो!
यसभन्दा अघि यो तेजस्वी शिष्यलाई उसको साधारण नामहरू, साइमन बार-जोना, वा जोनाको छोरोले मात्र बोलाउँथे; तर अब गुरुले उनलाई यी शब्दहरुमा एक आध्यात्मिक नाम दिए: "अनि म तिमीलाई भन्छु कि तिमी पत्रुस हौ; र यो चट्टानमा [ग्रीक शब्द पेट्रोस वा ढु गाको अर्थ] म मेरो चर्च बनाउनेछु; र नरकका ढोकाहरू [हेड्स, अंडरवर्ल्ड वा चिहान] यसमाथि विजय हासिल गर्न सक्दैनन्। " अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, येशूले आफ्नो समाज स्थापना गर्ने उद्देश्य राख्नुभयो, व्यक्तिगत पीटरलाई मृत्युको रूपमा होइन, तर ईश्वरीय शक्तिमा जुन पत्रुसले साँचो मसीहको कबूल गरेको पछाडि थियो।
अब यो कुरा पत्रुसलाई स्पष्ट भयो कि ईश्वरीय जीवन, सत्य र प्रेम, मानव व्यक्तित्व होइन, बिरामीलाई निको पार्ने र चट्टान, सद्भावको जगमा दृढ आधार हो। यो आध्यात्मिक तवरमा वैज्ञानिक आधारमा येशूले आफ्नो निको पार्नुभयो जुन बाहिरी मानिसहरूलाई चमत्कारिक लाग्यो।
सत्य युगको चट्टान हो, कुनाको टाउकोको ढुगा, "तर जसमाथि यो खस्छ, त्यसले उनलाई पाउडरमा कुल्चन्छ।"
सत्यको शक्ति बाहेक अरू केही त्रुटिको डरलाई रोक्न सक्दैन, र त्रुटिमा मानिस प्रभुत्व प्रमाणित गर्न सक्दछ।
भौतिक इन्द्रियको गवाही न त पूर्ण हो न ईश्वरीय नै हो। त्यसकारण, म येशू, उहाँका प्रेरितहरू, भविष्यवक्ताहरू र मनको विज्ञानको गवाहीमा असुरक्षित रूपमा रोपिरहेछु। त्यहाँ अन्य जग कुनै पनि छैन। सबै अन्य प्रणालीहरू - पूर्ण रूपमा वा आंशिक रूपमा भौतिक इन्द्रियहरूको माध्यमबाट प्राप्त ज्ञानमा आधारित प्रणालीहरू - चट्टानमा बनेका घरहरू होइन तर हावाले हल्लाइएका नर्कहरू हुन्।
सत्य, उनको अनन्त कानून को माध्यम बाट, त्रुटि। सत्यले पापलाई आफैंमा धोका दिन्छ र पशुको चिन्हमा त्रुटि राख्छ। दोषी बहाना गर्न वा लुकाउन स्वभाव पनि दंडित छ। न्यायको बेवास्ता र सत्यको अस्वीकारले पापलाई निरन्तरता दिँदछ, अपराध निम्त्याउँछ, आत्मसंयमलाई जोखिममा पार्छ, र ईश्वरीय कृपाको गिल्ला गर्दछ।
विज्ञानबाट प्रेरित विश्वास तथ्यमा छ कि सत्य वास्तविक हो र त्रुटि अवास्तविक छ। त्रुटि सत्य अघि डरपोक छ। ईश्वरीय विज्ञान भन्छ कि त्यो समयले यी सबै प्रमाणित गर्दछ। सत्य र त्रुटि दुबै मानिसहरु को आशंका को लागी पहिले भन्दा निकट आएको छ, र त्रुटि अझै स्पष्ट हुनेछ त्रुटि स्वयं नष्ट भएको छ।
गम्भीर धारणाको बिरूद्ध कि त्रुटि सत्य जत्तिकै वास्तविक छ, त्यो दुष्ट भन्दा राम्रो नहुने हो भने शक्तिमा बराबर हो, र त्यो मतभिन्नता सद्भाव जत्तिकै सामान्य छ, बिरामी र पापको बन्धनबाट स्वतन्त्रताको आशा समेत स्नायुको लागि सानो प्रेरणा हो। प्रयास गर्नुहोस्। जब हामी त्रुटिपूर्ण भएको भन्दा सत्यमा बढी विश्वास गर्न सक्छौं, पदार्थ भन्दा आत्मामा बढी विश्वास, मर्नु भन्दा जिउने कुरामा बढी विश्वास, मानिसमा भन्दा परमेश्वरमा विश्वास, तब कुनै भौतिक कल्पनाले हामीलाई रोक्न सक्दैन। बिरामीलाई निको पार्दै र त्रुटिलाई नष्ट गर्दै।
सामग्रीको रूपमा, सैद्धान्तिक जीवन-अस्तित्व अस्तित्वको गम्भीरताका रूपमा फेला पर्‍यो, मानवको आध्यात्मिक र ईश्वरीय सिद्धान्त मानव चिन्तनमा चल्छ, र यसलाई "सानो बच्चा भएको ठाउँमा" जान्छ - यहाँ सम्म कि नयाँ- पुरानो विचार, हुनुको आत्मिक भावना र जीवनले के समावेश गर्दछ। यसरी सम्पूर्ण पृथ्वी सत्यको द्वारा यसको प्रकाशको प्रकाशमा परिवर्तन हुन्छ, त्रुटिको अन्धकारलाई पछ्याउँदै।
तपाइँलाई थाहा हुन सक्छ जब पहिलो सत्यले यसका अनुयायीहरूको थोरै र वफादारीको नेतृत्व गर्छ। यो यो छ कि समय को मार्च पछि स्वतन्त्रताको ब्यानर दिन्छ। यस संसारका शक्तिहरु लड्न, र आफ्नो प्रेषकहरु लाई सत्य को रक्षा गर्न को लागी आदेश दिनेछ जब सम्म यो आफ्नो प्रणाली को सदस्यता छैन; तर विज्ञान, पोइन्ड संगीन हेडिंग नगरी अगाडि बढ्छ। त्यहाँ जहिले पनि केही गडबड हुन्छ, तर सत्यको मानकमा प्रतिफल हुन्छ।
केही व्यक्ति सत्यको स्पर्शमा बिस्तारै उत्पादन गर्दछन्। कुनै संघर्ष बिना थोरै उपज, र धेरैले उपज पाएको छ भनेर स्वीकार गर्न हिचकिचाउँदछन्; तर जब सम्म यो प्रवेश गरिएको छैन, खराबी आफैमा राम्रो भन्दा घमण्ड गर्नेछ। क्रिश्चियन साइन्टिष्टले दुष्टता, रोग र मृत्युलाई कम गर्नका लागि दर्ता गरेको छ; र उनीहरूको शून्यता र ईश्वरीयता वा राम्रा कुरा बुझेर उहाँमाथि विजयी हुनुहुनेछ। रोगबिमार भनेको पाप भन्दा कम प्रलोभन हो, र ती दुवैमाथि परमेश्वरको शक्तिलाई बुझेर ती दुवैलाई निको पार्नुहुन्छ। इसाई वैज्ञानिकलाई थाहा छ कि तिनीहरू विश्वासका त्रुटिहरू हुन्, जुन सत्यले गर्न सक्छ र नष्ट गर्न सक्छ।
13. 380 :4मात्र
सत्य सधैं विजयी हुन्छ।